MEAGLE IMBWA INOBEREKA RUZIVO UYE MIFANANIDZO - IMBWA
Meagle Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
Beagle / Miniature Pinscher yakavhenganiswa Mhando Dzembwa
Iyi Beagle / Min Pin musanganiswa (Meagle) ingangoita yemwedzi mitanhatu yekukura mumufananidzo uyu. Amai vake vaive Beagle uye baba Min Min.
Iyo Meagle haisi imbwa yakachena. Muchinjikwa pakati pe Beagle uye iyo Miniature Pinscher . Nzira yakanakisa yekuziva hunhu hwerudzi rwakavhenganiswa ndeyekutarisa mhando dzese mumuchinjikwa uye uzive kuti iwe unogona kuwana chero musanganiswa wechero hunhu hunowanikwa mune chero rudzi. Haasi ese eaya akagadzika imbwa dzakauchikwa dziri kuberekwa dziri 50% dzakachena kusvika ku50% dzakachena. Zvakajairika kuti vafudzi vaberekane mizhinji-chizvarwa michinjikwa .
American Canine Mbeu dzakauchikwa Club = Meagle
Mugadziri Anobereka Registry = Megie
Dhizaini Imbwa Kennel Kirabhu = Meagle
International Dhizaini Canine Registry®= Meagle
'Uyu ndiIzzy. Iye ndiye wedu wemwedzi mina-ane makore Meagle (Min Pin / Beagle musanganiswa) uye anoshamisa chose. Izzy chaive chipo kwandiri pazuva rangu rekuzvarwa gumi nemasere, mwedzi miviri chete mushure mekunge ndarasikirwa nembwa yangu yemakore gumi nemashanu, uye iye zvechokwadi abatsira kugadzirisa moyo wangu wakaputsika. Kunyangwe iye asingazombotsiva imbwa yangu, atanga chitsauko chitsva muhupenyu hwangu. Pamwedzi mina ye4, mhuri yangu inoda kumudaidza kuti 'Wild Izzy' uye zita racho harigone kutendeka. Iye ari nesimba , kunakidza, kupenga, anoda dzimwe imbwa nekatsi uye nevanhu. Iye anoyevedza. Ndakagamuchira Izzy paaingova nemavhiki mashanu ekuberekwa. Izvi zvakabva zvandinetsa, sezvo ndaiziva kuti izvi zvaive zvidiki kuti ndive kure naamai vake. Ndakabva ndangomutora kuenda kun'anga ndikatambira zvekuwedzera mavitamini. Pakugamuchira Izzy, ndakanga ndisingazive zvekutarisira. Mushure mezvose, iyo yekupedzisira nguva yandakanga ndine mbwanana yaive pandakanga ndiri 3. Chinhu chechipiri chandakaita kuvhura komputa yangu uye Googled Meagle. Saiti yako yakaonekwa uye izvi ndizvo zvandakaisa ruzivo rwangu rwehybrid kubva uye yanga ichibatsira zvinoshamisa. Izzy aive chikomborero, akarara husiku hwese uye dzimba nyore. Ini ndinoda kutaura kuti tese takadzidza zvakawanda kubva kune mumwe nemumwe. Akadzidza yekutanga mirairo sekuuya, kutora, kugara nekunyepa zvese nemwedzi mitatu uye ini ndakadzidza kukura uye kuve nebasa. Mushure mezvose, ndaive nemumwe munhu anovimba neni pane zvese. Amai vangu vakaona Izzy 'mbuya vake' uye vakaburitsa pachena kuti ndiye ega 'mukuru' chero chaanoda kwemakore mazhinji. Haha. Pane iyo nguva iyo amai vangu imbwa-vanogara Izzy, ndinouya kumba kuzowana dhairekodhi idzva pakombuta yedu yekumba zita 'Izzy x-xx-09' ine chaiyo mazana emifananidzo. '
chihuahua imbwa nhema uye shava
'Izzy the Meagle pamwedzi mipfumbamwe - Izzy anga akanaka uye takadzidzisana zvakanyanya. Akanyatsodzidziswa zvinoshamisa. Iye achiri 'Wedu Izzy' asi diki tamer vhezheni. Izzy mwana akaraswa manje uye ini ndainzwa saamai pazuva rakaitika ndakagara uye ndichinetseka nezvake, asi aive akanaka uye akapora nekukasira. Iye kubvira asangana nehama dzake mbiri 'uye anomhanya navo kwemaawa, zvakanaka anomhanya kwemaawa, havagone kuenderera. Patakaenda kunotora Izzy, zvakanaka akatinyatsotitora, isu takanhonga runt. Dzese dzaimbove imbwa dzangu dzave kumhanya uye dzinogara dzakakosha uye Izzy akazviratidza izvi. Kusiyana nevanin'ina nehanzvadzi dzake vane makumbo mapfupi uye muswe, makumbo aIzzy anomira achikwiridzira 13 inches kureba. Anozviisa pamusoro pavo uye ane hunhu hunoshamisa. '
Minnie the Beagle Miniature Pinscher musanganiswa pazera regore (Meagle) - muridzi wake anoti, 'Ndiye imbwa ine simba kwazvo yatinayo. Ane hunhu hwakanakisa kubva kune ese eMini Pin neBeagle :) '
Minnie the Beagle / Miniature Pinscher musanganiswa pamwedzi mitatu (Meagle)
TO marara eMeagle vana pavhiki ina-— 'Vana vevacheche imbwa dzese dzakazara nembwa. Ivo baba ndi chena Beagle uyo anogara kumusoro kwemugwagwa kubva kwatiri. Amai vavo imbwa yangu uye ari Min Pin . Akave nemarara ake ekutanga neBeagle yemuvakidzani. Ndiye chete imbwa yaachave nayo, uye ihama dzakanaka kwazvo dzinotamba pamwechete mazuva ese. Ndosaka ndakafunga kuti chichava zano rakanaka kuvarega varoorane. My Min Pin Poochy, amai vane hanya uye vane hanya. Iye nababa imbwa dzakangwara kwazvo, kunyangwe ndakamununura kubva kuvanhu vanotyisa, zvakapfuura hazvina kukanganisa hunhu hwake zvachose. Tsvina ndeyemusikana mumwe nevakomana vatatu uye vese vane hunhu hwakanaka kubva kuvabereki vese. Ivo vatove akadzidziswa kuenda pabepa uye vari kudya vega. Vanenge vanyoroveswa chose. Vari kutamba nemumwe uye vari kuita nemazvo. Ndinovafudza chikafu chisina mbwanana chikafu nemukaka wekuwedzera unosanganiswa pamwechete. Ndiri kutarisira kuvawanira dzimba dzine rudo nekukurumidza uye izvi zvichanetsa kuvaona vachienda nekuti vakomana vadiki ava vanotapira uye vane rudo. 'Iyi ndeimwe yemasanganiswa akanakisa emarudzi mumaonero angu.'
Meagle (Beagle / Min Pin musanganiswa) sembwanana pamasvondo mana ekurara
TO marara eMeagle (Beagle / Min Pin musanganiswa) vana pamasvondo mana ekuberekwa
Marara eMeagle (Beagle / Min Pin musanganiswa) vana vane vhiki ina
Ona mimwe mienzaniso yeMeagle
Meagle Mifananidzo 1
Meagle Mifananidzo 2
Chinyorwa cheBeagle Sanganisa Yakarera Imbwa
Chinyorwa che Miniature Pinscher Sanganisa Mbudzi Dzembudzi
diki doberman pinscher chihuahua musanganiswa
mombe dzeAustralia imbwa inosanganisa vana
chirungu springer spaniel chiropa uye chena
great dane st. bernard musanganiswa
American bulldog yakakura dane musanganiswa